Madaxweynaha Puntland oo qanciyay Odayaasha gobolka Bari ee ku kacsanaa | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Puntland oo qanciyay Odayaasha gobolka Bari ee ku kacsanaa
Madaxweynaha Puntland oo qanciyay Odayaasha gobolka Bari ee ku kacsanaa
Garoowe (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Jimcihii maanta Qado Sharaf ugu sameeyay deegaanka Jibigalle ee duleedka Garoowe, qaar ka mid ah Hoggaanka dhaqanka ee Gobolka Bari oo maalmahan ku sugnaa Garoowe.
Kulanka waxaa ka qeybgalay guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl, qaar ka mid ah xubnaha labada Gole ee Dowladda, Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada maamulka Puntland, Hoggaanka Dhaqanka, Ganacsato iyo marti sharaf kale.
Madaxweynaha Puntland ayaa bogaadiyey kaalinta muhiimka ah ee hoggaanka dhaqanku ku leeyihiin Dhismihii iyo illaalinta jiritaanka Puntland, wuxuuna kula dardaarmay inay halkaasi hore uga sii wadaan kana shaqeeyaan nabadgelyada, midnimada iyo horumarka Puntland.
Hoggaanka dhaqanka ee Gobolka Bari ayaa Madaxweynaha uga mahadceliyey qado sharafta iyo is-xog-wareysiga, waxayna sheegeen in marwalba ay dhaqanku garab taagan yihiin dowladdooda, illaalinta nabadgelyada iyo horumarka Puntland.
is xog wareysi
qado sharaf loo sameeyay odayaal